Thola ezinye izindawo ezithokozisayo zohambo lwangempelasonto | Izindaba Zokuhamba
Yize kunendlela ende okufanele uhambe ngayo ukuze ube neholide eligcwele, iqiniso ukuthi izihambi zizohlala zinayo i- ukuphunyuka ngempelasonto. Lezo zindawo ezingabonakala ngesikhathi esifushane futhi ezingakuhlelwa kalula. Kungakho sizokunikeza imibono yezindawo ongabalekela kuzo izinsuku ezimbili.
Kokubili ngaphakathi kweSpain naseYurophu kunezindawo ezingaba khona ukujabulela ngempelasonto emfushane. Le yimibono embalwa yezindawo eziningi ezitholakala kuwo wonke umuntu. Ngakho-ke phakamisa izikhwama zakho ngempelasonto futhi ujabulele ukubaleka.
1 Ukuphunyuka eSpain
1.3 URías Baixas
2 Izindlela zokuphunyuka eYurophu
Uma singafuni ukuhamba kakhulu futhi sinakho ezinye izindawo eziseduze, singahlala sifinyelela kubo ngemoto. Kunoma ikuphi, izindiza ngaphakathi kweSpain zivame ukuba nezindleko eziphansi futhi kuhlala kunezikhathi ngokunikezwa okuthakazelisayo.
Inhlokodolobha iyindawo enhle kulabo abangakabi nalo ithuba lokuyibona. Mhlawumbe impelasonto ifushane ukubona zonke izinto enazo ngokuthula kwengqondo, kepha ngaphandle kokungabaza kuyisikhathi sokubona izikhumbuzo nezindawo zayo eziyizifanekiselo. Lapho uvakashela inhlokodolobha kufanele uthathe uhambo oludabula iPaki yaseRetiro, vakashela i- IPuerta del Sol noma iRoyal Palace. Iminyuziyamu ukuvakashelwa okubalulekile, ikakhulukazi iPrado Museum, kodwa futhi kufanele ubone iReina Sofía Museum kanye neThyssen-Bornemisza Museum. Ezinye izindawo ezithakazelisayo yiGran Vía, egcwele umsebenzi noma iMeya yePlaza. Ezinganeni kukhona iParque Warner, iFaunia neZoo.
Ngesikhathi sasebusika sifuna ukuthatha ithuba lokubaleka elangeni ngezikhathi ezithile. Isibonelo ku-Tenerife, enikeza izindiza kuzindiza zombili ezisenyakatho naseningizimu. Ngesikhathi uvakashele eTenerife uzokujabulela amabhishi ayo amahle, njengalawo ICosta Adeje noma iLos Cristianos. Kepha futhi kufanele usebenzise usuku ukubona iTeide edumile, intabamlilo yesiqhingi. Mangaza le ndawo ngezindawo zayo ezixakile zenyanga. Kufanele ukhuphukele phezulu ngemoto yekhebula bese ugoqa, ngoba kwesinye isikhathi kuneqhwa ngisho.
Okunye ukuphunyuka okungaba yindawo enhle unyaka wonke yiRías Baixas eGalicia. Yonke iGalicia inikeza izikhuthazo okufanele zivakashelwe, zombili kubantu bayo kanye nokudla kwayo okumnandi namathafa amahle. I- IRías Baixas yindawo evakashelwa ngokukhethekilenjengoba inikeza ukuzijabulisa okuningi. Ngempelasonto ungajabulela ukubukeka kwe-O Grove noma i-Illa de Arousa. Ngaphezu kwalokho, kufanele uvakashele eCambados, lapho kuzalwa khona iwayini elidumile lase-Albariño, ukuze ubone ezinye zewayini zakhona bese unambitha lamawayini.
IGranada ngenye yamadolobha anqoba wonke umuntu oyivakashelayo. Inamakhelwane amahle futhi athokomele, kanye nezinye izikhumbuzo zobuhle obukhulu. I-Alhambra kufanele ibonwe, kodwa kufanele ubheke ithikithi kusengaphambili, ngoba kwesinye isikhathi lithengisiwe. Ezinye izindawo ezithakazelisayo yiRoyal Chapel noma iCathedral, iPuerta de Elvira neScience Park.
IBarcelona ingelinye lamadolobha okufanele ubone okungenani kanye. Kuyo imisebenzi kaGaudí ivelele, njenge Ithempeli elichazayo lomndeni ongcwele, Casa Milá noma iPark Güell. Kufanele futhi ubone indawo yeRamblas, Montjüic noma ikota yeGothic. Kuneminyuziyamu eminingi, njengePicasso Museum, iNational Art Museum yaseCatalonia noma iChocolate Museum.
Izindlela zokuphunyuka eYurophu
I-Las ukuthola ezinye idolobha laseYurophu zingenzeka futhi, ngoba kulezi zinsuku ungathola izindiza ezishibhile eziya ezindaweni ezahlukahlukene. Sikunikeza imibono.
IPrague, eCzech Republic, iyindawo enikeza yonke intelezi yaseYurophu. I- ICharles Bridge noma iPrague Castle ngukuhambela kwakhe okubalulekile okubili. Ngaphezu kwalokho, kufanele ubone indawo yaseMalá Strana, endala kunazo zonke edolobheni, iPowder Tower, i-Astronomical Clock, iSt Vitus Cathedral, amathuna amaJuda noma iWenceslas Square.
Idolobha laseLondon liyindawo enhle, okulula futhi ukuyithola ngenxa yenethiwekhi yalo engaphansi komhlaba. Kuwo kufanele ujabulele I-Westminster, iTower of London, iBuckingham Palace, iLondon Eye, iPiccadilly Circus noma iBritish Museum. Izimakethe nazo zidume kakhulu futhi ziyaheha, ikakhulukazi le eseCamden naleyo esePortobello.
Awukwazi ukuphuthelwa inhlokodolobha yasePutukezi ngezimpelasonto ozibalekele ngazo. Indawo yokujabulela i-fado nama-greats izikhumbuzo ezifana neTorre de Belém, iSigodlo saseJerónimos noma Inqaba yaseSan Jorge. Izindawo zasedolobheni nazo zinesasasa elikhulu, njengeChiado noma i-Alfama.
IParis ingenye yalezi zindawo lapho ungabona khona into esemqoka ezinsukwini ezimbili. Ukubalekela kwezothando eParis uhlelo oluhle kakhulu njengezithandani. Khuphukela embhoshongweni we-eiffel, Ukudla kwasekuseni endaweni yokudlela yaseParis ebukekayo, ukubona iNotre Dame Cathedral, iSacré-Coeur noma iLouvre Museum kubalulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Izindawo ongazibalekela ngempelasonto